झापाका पपुलर सांसद को को ? जनमतले के भन्छ ?
By radiovision on	 December 13, 2017 प्रमुख समाचार, स्थानीय
झापामा लोकप्रिय मतमा झापा क्षेत्र नम्वर ४ का नवनिर्वाचित सांसद एलपी साँवा अगाडि देखिनु भएको छ । क्षेत्र नम्वर ४ का वडामा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका वडाध्यक्षका उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको मत ३७,८१६ र कांग्रेसका वडाध्यक्षका उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको मत २२९२३ मा १४८९३ मतको अन्तरले एमाले, माओवादी र राप्रपा गठबन्धन अगाडि थियो । तर, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमाले उम्मेद्वार सावाँले ४३५१५ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो भने नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार देउमान थेवेले २६८२२ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । पहिले सो क्षेत्रमा रहेको अन्तरभन्दा एमाले उम्मेद्वार सावाँले १६,६९३ मतको अन्तर बढाएर लैजानु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको चुनावमा सावाँलाई लोकप्रिय मत १८०० बृद्धि भएको छ ।
प्रदेशसभा तर्फ झापा क्षेत्र नम्वर ५ को प्रदेशसभा क्षेत्र नम्वर २ मा एमाले उम्मेद्वार अर्जुन राई पनि लोकप्रिय मतमा अगाडि हुनुहुन्छ । स्थानीय तहको चुनावमा सो क्षेत्रमा १८६६६ मतान्तरले राईको पक्षमा जनमत थियो । प्रदेशसभाको चुनावमा अर्जुन राई ३०९७३ मत प्राप्त गरी विजयी बन्दा कांग्रेसका राजनबहादुर ढुङ्गानाले १०९९३ मत प्राप्त गर्नुभयो । राईको अन्तर १९९८० हुन पुग्यो । स्थानीय तहमा रहेको अन्तरभन्दा राईको पक्षमा अहिले १३१३ मतले अन्तर बढेको देखिएको छ ।
त्यस्तै झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ४ को प्रदेशसभा क्षेत्र नम्वर २ मा एमालेका उम्मेद्वार हिरा थापा पनि स्थानीय तहको मत विवरणभन्दा बढी पपुलर मत ल्याएर प्रदेशसभामा निर्वाचित हुनु भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन दलका उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको मत र कांग्रेसका वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मतमा ९३२१ मतको फरक थियो । यो चुनावमा थापाले २४९०१ मत प्राप्त गरी विजयी बन्दा कांग्रेस उम्मेद्वार उत्तम शर्मा सुवेदीले १४९६५ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । दुई उम्मेद्वारबीच ९९३६ मतान्तरले अगाडि रहनु भएका थापाले स्थानीय तहमा वडाध्यक्षले पाएको मत भन्दा ६१५ पपुलर मत पाउनु भएको छ ।
झापा ५ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ३१ हजारको मतान्तरले जित्नु पर्नेमा २८ हजार मतको अन्तरले जित्नु भएको छ । क्षेत्र नम्वर २ मा पवित्रा निरौला खरेलले १७ हजार मतान्तरले जित्नु पर्नेमा १३ हजार मतले जित्नु भएको छ । क्षेत्र नम्वर ३ मा २५ हजारको मतान्तरमा जित्नु पर्नेमा १३ हजार मतले जित्नु भयो । क्षेत्र नम्वर १ मा १७ हजारको मतान्तर हुनु पर्नेमा लगभग ३ हजार मतको मात्र मतान्तर देखिँदा ती क्षेत्रमा गठबन्धन दलको मत कायम राख्न चुनौती देखिएको छ ।
प्रदेशसभा तिरका कुरा गर्ने हो भने श्रीप्रसाद मैनाली, गोपालचन्द्र बुढाथोकी, एकराज कार्की, बृख प्रधान, झलकसिंह दर्लामी र हिक्मत कार्कीले हिजोको गठबन्धनको मतलाई कायम राख्न नजिक नजिक पुगेको पछिल्लो मत परिणामले देखाएको छ ।